Zapier | को प्रयोग गरेर लिंक्डइनमा स्वचालित रूपमा तपाइँको WordPress पोस्टहरू कसरी साझेदारी गर्ने Martech Zone
Zapier प्रयोग गरेर लिंक्डइनमा स्वचालित रूपमा तपाइँको WordPress पोस्टहरू कसरी साझेदारी गर्ने
बिहीबार, फेब्रुअरी 18, 2021 बिहीबार, फेब्रुअरी 18, 2021 Douglas Karr
मेरो आरएसएस फिड वा मेरो पोडकास्ट सोशल मीडियामा मापन गर्न र प्रकाशन गर्नका लागि मेरो मनपर्ने उपकरणहरू मध्ये एक हो फिडप्रेस। दुर्भाग्यवस, प्लेटफर्ममा लिंक्डइन एकीकरण छैन, यद्यपि। म त्यहाँ पुगेँ कि उनीहरूले यसलाई थप्दै छन् कि भनेर हेर्नुहोस् र तिनीहरूले वैकल्पिक समाधान प्रदान गरे - लिन्क्डइनमा मार्फत प्रकाशन Zapier.
Zapier WordPress प्लगइन LinkedIn मा
Zapier एक मुट्ठीभर एकीकरण र सयौं घटनाहरूको लागि नि: शुल्क छ, त्यसैले म यो समाधान कुनै पनि पैसा खर्च नगरी यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछ ... अझ राम्रो! कसरी सुरू गर्ने भन्ने बारे यहाँ छ:
एक WordPress उपयोगकर्ता थप्नुहोस् - म Zapier को लागी एक WordPress को लागी एक उपयोगकर्ता को लागी सिफारिश गर्दछु र एक विशिष्ट पासवर्ड सेटिंग। यस तरीकाले तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत पासवर्ड परिवर्तन गर्ने बारे चिन्ता लिनुपर्दैन।
Zapier WordPress प्लगइन स्थापना गर्नुहोस् - द Zapier WordPress प्लगइन तपाइँलाई तपाइँको WordPress सामग्रीलाई विभिन्न सेवाहरूको टनहरूमा एकीकृत गर्न अनुमति दिन्छ। प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड थप्नुहोस् जुन तपाईंले Zapier को लागी सेट गर्नुभयो।
लिंक्डइन जैपमा WordPress थप्नुहोस् - द Zapier लिंक्डइन पृष्ठमा पहिले नै सूचीबद्ध धेरै संख्यामा एकीकरणहरू छन् ... जसमध्ये एउटा लि one्कडिनमा WordPress हो।
Zapier WordPress लाई LinkedIn टेम्प्लेट
LinkedIn मा लग इन गर्नुहोस् - तपाईंलाई लिंक्डइनमा लग इन गर्न र एकीकरणका लागि अनुमतिहरू प्रदान गर्न सोधिनेछ। एकचोटि तपाईंले गर्नुभयो, Zap जडित छ।
तपाईंको Zap खोल्नुहोस् - तपाईंको Zap सक्षम गर्नुहोस् र अर्को पटक तपाईं WordPress मा एक पोस्ट प्रकाशित गर्दा, यो लिंक्डिनमा साझेदारी हुनेछ! अब तपाई Zapier आफ्नो Zapier ड्यासबोर्ड मा सक्रिय देखेंगे।
र त्यहाँ तपाईं जान! अब जब तपाइँ तपाइँको पोष्ट WordPress मा प्रकाशित गर्नुहुन्छ, यो स्वचालित रूपमा लिंक्डइनमा प्रकाशित हुनेछ।
ओह ... र अब जब म त्यहाँ प्रकाशित गर्दैछु, सायद तपाईं मलाई लिंक्डइनमा अनुसरण गर्न चाहानुहुन्छ!
पालना Douglas Karr लिंक्डइनमा
टैग: लिin्कडिनमा फिडLinkedInलिin्कडिन प्रकाशनलि linked्कडिनमा WordPress प्रकाशित गर्नुहोस्RSS लाई लि linked्कडिनमासामाजिक मिडिया प्रकाशनWordPressWordPress प्लगइनलि linked्कडिनमा वर्डप्रेसलि linked्कडिन zap मा WordPresszapperzapier WordPress प्लगइन
क्रोडफायर: डिस्कभर, क्युरेट, सेयर गर्नुहोस्, र सोशल मिडियाको लागि तपाईंको सामग्री प्रकाशित गर्नुहोस्